Torolàlana ho an'ny Procrastinator amin'ny fialantsasatra amin'ny fialantsasatra | Martech Zone
Tonga eto amin'ny fomba ofisialy ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra ary manangana azy io ho iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny firaketana. Miaraka amin'ny eMarketer maminavina ny fandaniam-bola amin'ny varotra e-varotra mihoatra ny 142 miliara dolara amin'ity vanim-potoana ity, misy be dia be ny fivezivezena, na dia ho an'ireo mpivarotra antsinjarany kely kokoa aza. Ny tetika hijanonana ho mpifaninana dia ny hakingan-tsaina momba ny fiomanana.
Raha ny tokony ho izy dia efa nanomboka an'ity dingana ity ianao, amin'ny fampiasana ireo volana vitsivitsy lasa izay handaminana ny fampielezan-kevitrao ary hananganana lisitra marika sy mpanatrika. Fa ho an'ireo izay mbola manafana ny moterany, mahereza: tsy tara loatra vao misy fiantraikany. Ireto misy dingana mivaingana efatra izay hanampy anao amin'ny fananganana sy fampiharana tetika fialantsasatra mahomby.
Dingana 1: Manatsara ny fandaharam-potoananao
Na dia ny andro fialantsasatra aza dia manome fisaorana ny Krismasy amin'ny Krismasy, ny vanim-potoana fialantsasatra fialantsasatra dia tsy voafaritra mazava. Miorina amin'ny fitondran-tena amin'ny fiantsenana amin'ny 2018, Google dia mampiseho izany 45% amin'ireo mpanjifa no nitatitra fa nividy fanomezana tamin'ny fialantsasatra tamin'ny 13 Novambra, ary maro no efa nahavita ny fiantsenany fialantsasatra tamin'ny faran'ny volana Novambra.
Miaraka amin'ny fandaharam-potoana marani-tsaina, ny fahatongavanao tara amin'ny fety dia tsy midika ho tsy fahatongavana amin'ny lalam-pirenena lehibe. Ampiasao amin'ny tapaky ny volana novambra ny fifantohana amin'ny marika sy ny fikarohana - izany dia hanampy anao hanatratra ny mpanjifa alohan'ny handinihany sy ny fividianany.
Rehefa manakaiky ny Thanksgiving sy ny Cyber ​​Week dia manomboka manomboka ny fifanarahana ary manitatra ny doka manerana ny fantsona, miteraka fientanam-po eo amin'ny mpanjifa. Avy eo, ampitomboy ny tetibola hikarohanao sy ny varotrao mialoha ny alatsinain'ny Cyber. Amin'ny ankapobeny, ny fampitomboana ny tetibola telo ka hatramin'ny dimy heny mandritra ny fetin'ny fialantsasatra dia hanome anao ny fotoana tsara indrindra hisamborana ireo fiovam-po fanampiny ireo eo amin'ny tsenan'ny fifaninanana.
Ary farany, ny Q1 dia voaporofo fa iray amin'ireo volana matanjaka indrindra amin'ny e-varotra, mitondra firoboroboan'ny fialantsasatra amin'ny taom-baovao. Tazomy hatrany ny teti-bolanao hatramin'ny 15 Janoary, fara fahakeliny, mba hahombiazana indrindra amin'ity firoboroboana amin'ny fiantsenana aorian'ny fialantsasatra ity.
Dingana 2: Ataovy lohalaharana ny personalization
Ny ankamaroan'ny mpivarotra enta-madinika dia tsy afaka manantena ny hampifanaraka ny tetibolan'ny dokambarotra goavambe toa an'i Amazon sy Walmart. Mba hijanonana ho mpifaninana, hividy marani-tsaina kokoa fa tsy ho sarotra kokoa - amin'ny alàlan'ny fanamarihana ny toetranao manokana.
Rehefa manangona ny mpihaino anao manokana sy toa anao ianao dia mifantoha amin'ny sanda andavan'andro. Iza amin'ireo lisitrao no nandany ny vola be taminao, ary iza no miantsena aminao matetika? Iza avy ireo mpiantsena tato ho ato? Ireo no tanjona kendrena voalohany amin'ny famarotana sy ny fivarotana an-tsokosoko, amin'ny alàlan'ny familiana ny fandaniana doka fanampiny, ny fanomezana sosokevitra mifandraika amin'izany, ny fanolorana bundling amin'ny fihenam-bidy na ny fanomezana fanomezana amin'ny ora.
Eo am-pikolokoloana ireo mpividy mandritra ny androm-piainany dia aza adino ny manara-dia sy mikendry ireo mpitsidika vaovao. Criteo dia mitatitra fa ireo mpitsidika tranokala izay manana tariby amin'ny doka aseho dia 70% azo inoana kokoa manova fo. Ny firaketana ireo hetsiky ny mpitsidika sy ny fananganana lisitra misy fizarana mandritra ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra dia lakilen'ny famerenanana azy ireo hiverina sy hiarovana ny fiovam-po.
Dingana 3: Fampiroboroboana Smart Craft
Ny fampiroboroboana dia miasa tsara indrindra raha mifanaraka amin'ny filàna sy ny safidin'ny mpihaino manokana anao. Avereno jerena ireo fironana fialan-tsasatra nataonao taloha ary diniho izay mandeha, avy eo manambola amin'ireo fisondrotana ireo.
Tsy azonao antoka hoe inona no mandeha tsara indrindra? eMarketer dia nitatitra fa ny ny tolotra fampiroboroboana manintona indrindra amin'ny 95% be loatra. Ilaina ihany koa ny fandefasana maimaim-poana raha azo atao, ary manintona ny mpanjifa ihany koa ny fanomezana maimaim-poana sy ny isa tsy mivadika. Miankina amin'ny vokatrao sy ny teti-bolanao, azonao atao ny mieritreritra daty fanaterana azo antoka, kaody coupon, set fanomezana efa voafonosina ary hafatra fanao.
Dingana 4: Ataovy vonona ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Vonona hanao fifamoivoizana amin'ny fialantsasatra ve ny tranonkalanao? Ny fanovana kely vitsivitsy dia mety hisy fiovana lehibe eo amin'ny fanaovana ny varotra farany.
Atombohy amin'ny fiantohana fa ny tranonkalanao dia mamaly ireo fanontaniana sy fisalasalana mipoitra mandritra ny traikefa fiantsenana. Firy ny sakana amin'ny fidirana? Mora ahoana ny fiverenana? Ahoana no fampiasako ny vokatra? Dingana tsotra toy ny fizarazarana vokatra isaky ny vidiny, mampiseho ny hevitry ny mpanjifa ary ny famaritana ny fahatsoran'ny fiverenana dia manampy amin'ny fananganana fifampitokisana amin'ireo mpanjifa.
Manaraka, ataovy mora ny fitetezana ny tranokalanao amin'ny finday. Ny fikarohana Google dia mampiseho izany 73% ny mpanjifa dia hiala amin'ny tranokala finday tsy dia tsara loatra mankany amin'ny tranonkala finday hafa manamora ny fividianana izany. Aza atahorana ho very ireo fiovam-po ireo amin'ny tsy fahitana ny fisian'ny findainao.
Farany, manatsara ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fivarotana e-varotrao: ny checkout. Makà fotoana hahalalana izay antony mahatonga ny mpivarotra mandao ny saretiny ary manitsy ireo olana ireo. Saram-pandefasana ve sa vidiny hafa tsy ampoizina? Sarotra sy mandany fotoana ve ny fizaranao? Tsy maintsy mamorona kaonty ve ny mpividy? Tsory ny fomba fanao araka izay azo atao mba hanomezana anao fotoana tsara indrindra hahavitana fivarotana.
Ireto misy dingana vitsivitsy fotsiny tokony horaisina rehefa miomana amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra ianao - fa na dia tara ianao na firy tara ianao, ny firosoana tsirairay mankany amin'ny fanatsarana sy ny personalization dia hanampy amin'ny fanovana farany. Mbola tsara kokoa aza, ny asa apetrakao ankehitriny, manomboka amin'ny faniriana mankany amin'ny fanovana tranokala ka hatramin'ny fampiroboroboana ny marika, dia efa manomana anao amin'ny marketing mahomby amin'ny Taom-baovao sy ny sisa.
Tags: herinandro cyberecommercefivarotana fialantsasatraOptimizationWalmart